दक्षिण सागर मोती इन्डोनेसिया - Gold South Sea Pearl Wholesale | Sea Pearl Dealer From Indonesia Pearl Farm | Tahitian Sea Pearl Wholesale | Moti Wholesale
Home / harga perhiasan mutiara lombok / दक्षिण सागर मोती इन्डोनेसिया
दक्षिण सागर मोती इन्डोनेसिया
इन्डोनेसिया दक्षिण सागर मोती
इन्डोनेसिया धनी माछापालन र सामुद्रिक उत्पादनहरूको साथ विश्वको सबैभन्दा ठूलो द्वीपसमूह हो। त्यस्ता उत्पादनहरू मध्ये एक दक्षिण सागर मोती हो, यथार्थ रूपमा मोती को सबै भन्दा राम्रो प्रकार मध्ये एक। समृद्ध प्राकृतिक स्रोतहरू मात्र होइन, इन्डोनेसियामा उच्च शिल्प कौशल भएका कारीगरहरूको प्रशस्तता पनि छ।
यस लेखको साथ, हामी तपाईलाई अर्को विशेष इन्डोनेसियाली उत्पादन, साउथ सी पर्ल ल्याइरहेका छौं। दुई महासागर र दुई महाद्वीपको क्रस-रोडमा अवस्थित देशको रूपमा, इन्डोनेसियाली संस्कृतिले स्वदेशी चलन र बहुविध विदेशी प्रभावहरू बीचको लामो अन्तरक्रियाद्वारा आकारको एक अद्वितीय मिश्रण देखाउँछ। इन्डोनेसियाको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाले विश्वलाई विभिन्न प्रकारका मोती गहना शिल्प कौशल प्रदान गर्दछ।
विश्वको शीर्ष खेलाडीहरू मध्ये एक, इन्डोनेसियाले अष्ट्रेलिया, हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया र थाइल्याण्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मोतीहरू शिल्प गरी निर्यात गर्दै आएको छ। तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८–२०१२ को अवधिमा मोतीको निर्यात मूल्य औसत वार्षिक १९.६९ प्रतिशतले बढेको छ । 2013 को पहिलो पाँच महिनामा, निर्यात मूल्य US $ 9.30 पुग्यो मिलियन।
उच्च गुणस्तरको मोती धेरै शताब्दीका लागि सुन्दरताको बहुमूल्य वस्तुहरू मध्ये एक मानिन्छ, अन्य रत्नहरू जस्तै। प्राविधिक रूपमा, एक मोती जीवित खोलिएको मोलस्क भित्र, नरम ऊतक वा आवरण भित्र उत्पादन गरिन्छ।
मोती क्याल्सियम कार्बोनेटले मिनेट क्रिस्टलीय रूपमा बनेको हुन्छ, जस्तै शान्तको खोल जस्तै, केन्द्रित तहहरूमा। एक आदर्श मोती पूर्णतया गोलो र चिल्लो हुनेछ तर नाशपातीका अन्य धेरै आकारहरू छन्, जसलाई बारोक मोती भनिन्छ।
किनभने मोतीहरू मुख्य रूपमा क्याल्सियम कार्बोनेटबाट बनेका हुन्छन्, तिनीहरू सिरकामा भंग गर्न सकिन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट कमजोर एसिड समाधानको लागि पनि अतिसंवेदनशील हुन्छ किनभने क्याल्सियम कार्बोनेटको क्रिस्टलहरूले सिरकामा एसिटिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरेर क्याल्सियम एसीटेट र कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ।
प्राकृतिक मोतीहरू जुन जङ्गलीमा सहज रूपमा पाइन्छ, सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छन् तर एकै समयमा धेरै दुर्लभ हुन्छन्। हाल बजारमा उपलब्ध मोतीहरू प्रायः मोती कस्तूरी र ताजा पानीको सिपीबाट खेती गरिएका वा खेती गरिएका हुन्।
नक्कली मोतीहरू पनि सस्तो गहनाको रूपमा व्यापक रूपमा उत्पादन गरिन्छ, यद्यपि गुणस्तर प्राकृतिक भन्दा धेरै कम छ। कृत्रिम मोतीहरू कमजोर iridescence छन् र सजिलै प्राकृतिक मोतीहरूबाट छुट्याउन सकिन्छ।
मोतीको गुणस्तर, प्राकृतिक र खेती गरिएको दुबै, यसको नक्रिस र इरिडिसेन्ट हुनुमा निर्भर गर्दछ जसरी तिनीहरूलाई उत्पादन गर्ने खोलको भित्री भाग हो। मोतीहरू प्रायः खेती गरिन्छ र गहना बनाउन कटनी गरिन्छ, तिनीहरू पनि भव्य कपडाहरूमा सिलाईका साथै कुस्ने र सौन्दर्य प्रसाधन, औषधि र रंगको मिश्रणमा प्रयोग गरिन्छ।
मोतीलाई यसको गठनको आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ: प्राकृतिक, सभ्य र नक्कल। प्राकृतिक मोतीको ह्रास हुनु अघि, करिब एक शताब्दी अघि, पत्ता लागेका सबै मोतीहरू प्राकृतिक मोती थिए।
आज प्राकृतिक मोतीहरू धेरै दुर्लभ छन्, र प्रायः न्युयोर्क, लन्डन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरूमा लगानी मूल्यहरूमा लिलामीमा बेचिन्छन्। प्राकृतिक मोती, परिभाषा अनुसार, मानव हस्तक्षेप बिना दुर्घटना द्वारा बनाईएको सबै प्रकारका मोती हुन्।
तिनीहरू संयोगको उत्पादन हुन्, एक सुरुवातको साथ जुन जलन गर्ने परजीवी जस्तै हो। यस प्राकृतिक घटनाको सम्भावना धेरै पातलो छ किनकि यो विदेशी सामग्रीको अनावश्यक प्रविष्टिमा निर्भर गर्दछ जुन सीपले आफ्नो शरीरबाट बाहिर निकाल्न सक्दैन।
एक संस्कारित मोतीले समान प्रक्रियाबाट गुज्र्छ। प्राकृतिक मोती को मामला मा, सीप एक्लै काम गरिरहेको छ, जबकि संस्कृति मोती मानव हस्तक्षेप को उत्पादन हो। सीपलाई मोती उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्न, एक प्राविधिकले जानाजानी सीप भित्रको जलन प्रत्यारोपण गर्दछ। शल्यक्रियाद्वारा प्रत्यारोपण गरिएको सामग्री मदर अफ पर्ल भनिने खोलको टुक्रा हो।
यो प्रविधि अष्ट्रेलियाका बेलायती जीवविज्ञानी विलियम साभिल-केन्टले विकास गरेका थिए र टोकिची निशिकावा र तात्सुहेई मिसेले जापानमा ल्याएका थिए। निशिकावालाई सन् १९१६ मा पेटेन्ट दिइएको थियो र उनले मिकिमोतो कोकिचीकी छोरीसँग विवाह गरेकी थिइन्।
मिकिमोटो निशिकावाको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम थिए। सन् १९१६ मा पेटेन्ट प्रदान गरिसकेपछि, सन् १९१६ मा जापानको अकोया पर्ल ओइस्टरमा यो प्रविधिलाई तुरुन्तै व्यावसायिक रूपमा लागू गरियो। अकोया ओइस्टरमा मोतीको व्यावसायिक बाली उत्पादन गर्ने मिसेसको भाइ पहिलो व्यक्ति थिए।
मित्सुबिशीका ब्यारोन इवासाकीले तुरुन्तै फिलिपिन्समा 1917 मा साउथ सी पर्ल ओइस्टर र पछि बुटोन र पलाउमा प्रविधि लागू गरे। मित्सुबिशी एक संस्कृतियुक्त दक्षिण समुद्री मोती उत्पादन गर्ने पहिलो थियो – यद्यपि यो 1928 सम्म थिएन कि मोतीको पहिलो सानो व्यावसायिक बाली सफलतापूर्वक उत्पादन गरिएको थियो।
नक्कल मोती पूर्ण रूपमा एक फरक कथा हो। धेरै जसो अवस्थामा, गिलास मनका माछाको तराजूबाट बनेको समाधानमा डुबाइन्छ। यो कोटिंग पातलो छ र अन्ततः बन्द हुन सक्छ। एकले सामान्यतया यसलाई काटेर नक्कल भन्न सक्छ। नक्कली मोतीहरू तपाईंको दाँतमा सर्छन्, जबकि वास्तविक मोतीहरूमा नेक्रेको तहहरू किरकिरा महसुस गर्छन्। स्पेनको मल्लोर्का टापु यसको नक्कली मोती उद्योगको लागि परिचित छ।
त्यहाँ मोतीका आठ आधारभूत आकारहरू छन्: गोलो, अर्ध-गोलाकार, बटन, ड्रप, नाशपाती, अंडाकार, बारोक, र सर्कल।
पूर्ण रूपमा गोलाकार मोतीहरू दुर्लभ र सबैभन्दा मूल्यवान आकार हुन्।
सेमी-गोलहरू पनि हार वा टुक्राहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ मोतीको आकार पूर्ण रूपमा गोलाकार मोती जस्तो देखाउन सकिन्छ।
बटन मोतीहरू थोरै चपटा गोलाकार मोती जस्तै हुन्छन् र यसले हार पनि बनाउन सक्छ, तर प्रायः एकल पेन्डेन्ट वा झुम्काहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ मोतीको पछाडिको आधा भाग छोपिएको हुन्छ, यसले यसलाई ठूलो, गोलाकार मोती जस्तो देखिन्छ।
ड्रप र नाशपाती आकारको मोतीलाई कहिलेकाहीँ टियरड्रप मोती भनिन्छ र प्रायः झुम्का, पेन्डन्ट वा हारमा केन्द्र मोतीको रूपमा देखिन्छ।
Baroque मोती एक फरक अपील छ; तिनीहरू प्रायः अद्वितीय र रोचक आकारहरूसँग अत्यधिक अनियमित हुन्छन्। तिनीहरू सामान्यतया हारमा पनि देखिन्छन्।
गोलाकार मोतीहरू मोतीको शरीरको वरिपरि केन्द्रित रिजहरू, वा औंठीहरूद्वारा विशेषता हुन्छन्।
हर्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) अन्तर्गत, मोतीहरूलाई तीन उप-श्रेणीहरूमा विभाजन गरिएको छ: प्राकृतिक मोतीहरूको लागि 7101100000, कल्चर्ड मोतीहरूको लागि 7101210000, unworked र 7101220000 कल्चर्ड मोतीहरूको लागि, काम गरिएको।
इन्डोनेसियाको पर्लको चमक
शताब्दीयौंदेखि, प्राकृतिक दक्षिण समुद्री मोती सबै मोतीहरूको पुरस्कारको रूपमा मानिन्छ। विशेष गरी इन्डोनेसिया र वरपरका क्षेत्रहरूमा, उत्तरी अष्ट्रेलिया जस्ता 1800 को प्रारम्भमा, भिक्टोरियन युगको दौडान युरोपमा मोतीहरूको सबैभन्दा रमाइलो युगमा परिणत भयो।
यस प्रकारको मोती अन्य सबै मोतीहरू भन्दा यसको भव्य बाक्लो प्राकृतिक नेक्रेले भिन्न छ। यो प्राकृतिक नेक्रेले एक असमान चमक उत्पन्न गर्दछ, जसले अन्य मोतीहरू जस्तै “चमक” मात्र प्रदान गर्दैन, तर एक जटिल नरम, अमूर्त उपस्थिति जसले विभिन्न प्रकाश परिस्थितिहरूमा मूड परिवर्तन गर्दछ। शताब्दीयौंदेखि भेदभावपूर्ण स्वादका साथ विशेषज्ञ जौहरीहरूका लागि दक्षिण समुद्री मोतीलाई माया गर्ने यस नेक्रेको सुन्दरता।
प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो मोती बोक्ने कस्तूरीहरू मध्ये एक, Pinctada maxima द्वारा उत्पादन गरिन्छ, जसलाई सिल्भर-लिप्ड वा गोल्ड-लिप्ड ओइस्टर पनि भनिन्छ। यो चाँदी वा सुनको ओठको मोलस्क डिनर प्लेटको आकारमा बढ्न सक्छ तर वातावरणीय अवस्थाहरूमा अत्यधिक संवेदनशील हुन्छ।
यो संवेदनशीलता दक्षिण सागर मोती को लागत र दुर्लभता मा थप्छ। यसरी, Pinctada maxima ले ९ मिलिमिटरदेखि २० मिलिमिटरसम्मका ठूला आकारका मोती उत्पादन गर्छ जसको औसत आकार लगभग १२ मिलिमिटर हुन्छ। नेक्रे मोटाई को श्रेय, दक्षिण सागर मोती पाइने अद्वितीय र मनपर्ने आकार को विविधता को लागी पनि प्रसिद्ध छ।
ती गुणहरूको शीर्षमा, दक्षिण समुद्री मोतीमा क्रीमदेखि पहेंलो गहिरो सुन र सेतोदेखि चाँदीसम्म रङहरूको एर्रे छ। मोतीहरूले गुलाबी, नीलो वा हरियो जस्ता फरक रंगको सुन्दर “ओभरटोन” पनि प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
आजकल, अन्य प्राकृतिक मोतीहरू जस्तै, प्राकृतिक साउथ सी मोती विश्व मोती बजारहरूबाट लगभग हराइसकेको छ। आज उपलब्ध दक्षिण सागर मोती को विशाल बहुमत दक्षिण सागर मा मोती फार्म मा खेती गरिन्छ।
इन्डोनेसियाको दक्षिणी समुद्री मोती
अग्रणी उत्पादक, इन्डोनेसियाको रूपमा, कसैले चमक, रंग, आकार, आकार र सतह गुणस्तरको सन्दर्भमा उनीहरूको सुन्दरताको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। इम्पेरियल गोल्डको राजसी रंगका मोतीहरू इन्डोनेसियाको पानीमा खेती गरिएका ओइस्टरहरूद्वारा मात्र उत्पादन गरिन्छ। चमकको सन्दर्भमा, दक्षिणी समुद्री मोती, प्राकृतिक र संस्कृति दुवै, एक धेरै फरक उपस्थिति छ।
तिनीहरूको अद्वितीय प्राकृतिक चमकको कारण, तिनीहरू एक कोमल भित्री चमक प्रदर्शन गर्छन् जुन अन्य मोतीहरूको सतहको चमक भन्दा फरक छ। यो कहिलेकाहीं एक फ्लोरोसेन्ट प्रकाश संग मोमबत्ती-प्रकाश को चमक तुलना को रूप मा वर्णन गरिएको छ।
कहिलेकाहीँ, धेरै राम्रो गुणस्तरका मोतीहरूले पूर्वको रूपमा चिनिने घटना प्रदर्शन गर्नेछ। यो रंगको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब संग पारदर्शी चमक को संयोजन हो। दक्षिण समुद्री मोतीहरूको सबैभन्दा उज्ज्वल रंगहरू सेतो वा सेतो विभिन्न रंगीन ओभरटोनहरू छन्।
ओभरटोनहरू इन्द्रेणीको लगभग कुनै पनि रंग हुन सक्छ, र दक्षिण सागर मोती ओइस्टरको नेक्रेको प्राकृतिक रङहरूबाट व्युत्पन्न हुन्छ। जब पारदर्शी तीव्र चमकसँग जोडिन्छ, तिनीहरूले “पूर्व” भनेर चिनिने प्रभाव सिर्जना गर्छन्। मुख्य रूपमा पाइने रंगहरूमा चाँदी, गुलाबी सेतो, सेतो गुलाब, गोल्डेन सेतो, सुनको क्रीम, शैम्पेन र इम्पेरियल गोल्ड समावेश छ।
इम्पेरियल सुनको रंग सबै भन्दा दुर्लभ छ। यो राजसी रंग इन्डोनेसियाली पानीमा खेती गरिएका ओइस्टरहरूद्वारा मात्र उत्पादन गरिन्छ। साउथ सी कल्चर्ड मोती आकारमा उच्च हुन्छन्, र सामान्यतया 10mm र 15 मिलिमिटरको बीचमा हुन्छन्।
जब ठूला आकारहरू भेटिन्छन्, 16 मिलिमिटरभन्दा माथिका दुर्लभ मोतीहरू र कहिलेकाहीं 20 मिलिमिटरभन्दा बढीका मोतीहरू पारखीहरूद्वारा उच्च मूल्यवान हुन्छन्। यदि सुन्दरता दर्शकको आँखामा छ भने, दक्षिणी समुद्री मोतीहरूले हेर्नको लागि सुन्दरताको असंख्य अवसरहरू प्रदान गर्दछ, किनकि कुनै दुई मोतीहरू ठ्याक्कै समान छैनन्। तिनीहरूको नेक्रेको मोटाईको कारणले गर्दा, दक्षिणी समुद्री संस्कृतिका मोतीहरू विभिन्न प्रकारका आकारहरूमा पाइन्छ।
पर्ल नेक्रे क्याल्सियम कार्बोनेट क्रिस्टल र ओइस्टरद्वारा उत्पादित विशेष पदार्थहरूको सुन्दर म्याट्रिक्स हो। यो म्याट्रिक्स पूर्ण रूपमा बनेको माइक्रोस्कोपिक टाइलहरूमा तहमा राखिएको छ। मोतीको मोटाई तहहरूको संख्या र प्रत्येक तहको मोटाई द्वारा निर्धारण गरिन्छ।
नेक्रेको उपस्थिति क्याल्सियम क्रिस्टलहरू “फ्लैट” वा “प्रिज्म्याटिक” हो कि टाईलहरू बिछ्याइएको पूर्णता र टाइलहरूका तहहरूको सूक्ष्मता र संख्याद्वारा निर्धारण गरिनेछ। प्रभाव
मोतीको सुन्दरता यी पूर्णताहरूको दृश्यताको डिग्रीमा निर्भर गर्दछ। मोतीको सतहको यो गुणलाई मोतीको रंग भनिन्छ।
यद्यपि आकारले मोतीको गुणस्तरलाई असर गर्दैन, विशेष आकारको मागले मूल्यमा असर गर्छ। सुविधाको लागि, साउथ सी कल्चर्ड मोतीहरूलाई यी सात आकार कोटिहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ। धेरै कोटिहरूलाई धेरै उप-श्रेणीहरूमा विभाजन गरिएको छ:
2) अर्ध राउन्ड;
4) अर्ध बारोक;
दक्षिण सागर मोती को रानी सौन्दर्य
इन्डोनेसियाले दक्षिणी समुद्री मोती उत्पादन गर्दछ जुन पिन्क्टडा म्याक्सिमाबाट खेती गरिन्छ, ओइस्टरको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति। पुरानो वातावरणको साथ एक द्वीपसमूहको रूपमा, इन्डोनेसियाले उच्च गुणस्तरको मोती उत्पादन गर्न Pinctada maxima को लागि इष्टतम वातावरण प्रदान गर्दछ। इन्डोनेसियाको Pinctada maxima ले एक दर्जन भन्दा बढी रंगको छायामा मोती उत्पादन गर्छ।
सुन र चाँदीका रङहरू भएका दुर्लभ र बहुमूल्य मोतीहरू उत्पादन हुन्छन्। नाजुक शेडहरूको विभिन्न दायराहरू, अरूहरू बीच, चाँदी, शैम्पेन, चम्किलो सेतो, गुलाबी र सुन, इम्पेरियल गोल्ड पर्ल सबै मोतीहरूमध्ये सबैभन्दा भव्य रूपमा।
पुरानो इन्डोनेसियाली पानीमा खेती गरिएको कस्तूरीले उत्पादन गरेको इम्पेरियल गोल्ड कलर पर्ल वास्तवमा साउथ सी पर्लको रानी हो। यद्यपि इन्डोनेसियाको पानी दक्षिण समुद्री मोतीको घर हो, तर मोतीको गुणस्तर र मूल्य सुनिश्चित गर्न आन्तरिक व्यापार र निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न एक नियम आवश्यक छ। सरकार र सम्बन्धित दलले गरेका छन्
चुनौती समाधान गर्न बलियो सम्बन्ध निर्माण।
चाइनिज मोती, ताजा पानीको झिल्लीबाट खेती गरिन्छ र कम ग्रेड भएको आशंकामा, सरकारले मोती गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी माछापालन तथा सामुद्रिक मामिला मन्त्रीस्तरीय नियमावली नम्बर ८/२००३ जारी गरेर केही सावधानी अपनाएको छ। कम गुणस्तरको तर इन्डोनेसियाली मोतीसँग मिल्दोजुल्दो चिनियाँ मोतीको रूपमा मापन आवश्यक छ। बाली र लोम्बोकमा इन्डोनेसियाली मोती उत्पादन केन्द्रहरूको लागि खतरा हुन सक्छ।
इन्डोनेसियाली मोतीको निर्यातमा सन् २००८-२०१२ को अवधिमा १९.६९% को औसत वार्षिक वृद्धि भएको उल्लेख छ। 2012 मा, अधिकांश निर्यात 51%.22 मा प्राकृतिक मोतीको प्रभुत्व थियो। कल्चर्ड मोती, काम नगरिएको, 31.82% र कल्चर्ड मोती, 16.97% मा काम गरी टाढा दोस्रोमा पछ्यायो।
सन् २००८ मा इन्डोनेसियाले मोतीको निर्यात १४.२९ मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै भएको थियो भने सन् २००९ मा उल्लेख्य रूपमा बढेर २२.३३ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
चित्र 1. मोती को इन्डोनेसियाली निर्यात (2008-2012)
2010 र 2011 मा क्रमशः US$31.43 मिलियन र US$31.79 मिलियनमा वृद्धि भयो। तर, निर्यात सन् २०१२ मा २९.४३ मिलियन अमेरिकी डलरमा झरेको थियो।
2013 को पहिलो पाँच महिनामा कुल घट्ने प्रवृत्ति US$9.30 मिलियनको साथ जारी रह्यो, जुन 2012 को सोही अवधिमा US$12.34 मिलियनको तुलनामा 24.10% को संकुचन हो।
चित्र २. इन्डोनेसियाली निर्यात गन्तव्य (२००८-२०१२)
2012 मा, इन्डोनेसियाली मोतीका लागि प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरू हङकङ, अष्ट्रेलिया र जापान थिए। हङकङमा भएको निर्यात १३.९० मिलियन अमेरिकी डलर वा कुल इन्डोनेसियाली मोती निर्यातको ४७.२४% थियो। जापान ९.३० मिलियन (३१.६०%) अमेरिकी डलर (३१.६०%) सँग दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य थियो र त्यसपछि अष्ट्रेलिया ५.९९ मिलियन अमेरिकी डलर (२०.३६%) र दक्षिण कोरिया १०५,००० (०.३६%) र थाइल्यान्ड अमेरिकी डलर ३६,००० (०.१२%) थियो।
2013 को पहिलो पाँच महिनामा, हङकङ फेरि US$ 4.11 मिलियन मोती निर्यात, वा 44.27% को साथ शीर्ष गन्तव्य थियो। अष्ट्रेलियाले जापानलाई २.५१ मिलियन अमेरिकी डलर (२७.०४%) ले दोस्रो स्थानमा राखेको छ भने जापान २.३६ मिलियन अमेरिकी डलर (२५.४७%) सँग तेस्रो र थाइल्यान्डले २७४,००० अमेरिकी डलर (२.९४%) र दक्षिण कोरिया २५,००० अमेरिकी डलर (०.२७%) सँग दोस्रो स्थानमा छ।
सन् २००८-२०१२ को अवधिमा हङकङले असाधारण औसत वार्षिक १२४.३३% वृद्धि देखाएको भएतापनि २०१२ को सोही अवधिको तुलनामा २०१३ को पहिलो पाँच महिनामा ३९.५९% ले संकुचित भएको थियो। जापानतर्फको निर्यातमा पनि ३५.६९ प्रतिशतको समान संकुचन देखिएको थियो। %
चित्र 3. प्रान्त द्वारा इन्डोनेसियाली निर्यात (2008-2012)
धेरै जसो इन्डोनेसियाली मोती निर्यात बाली, जकार्ता, दक्षिण सुलावेसी र पश्चिम नुसा टेङ्गारा प्रान्तबाट US$ 1,000 देखि US$ 22 मिलियन सम्मको मूल्यमा उत्पन्न हुन्छ।
चित्र 4. देश द्वारा विश्वमा मोती, नाट वा पंथ, आदि को निर्यात (2012)
सन् २०१२ मा विश्वको कुल मोती निर्यात १.४७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ जुन सन् २०११ मा १.५७ बिलियन अमेरिकी डलरको निर्यातको तुलनामा ६.४७% कम थियो। 2008-2012 को अवधिमा, औसत वार्षिक 1.72% को संकुचनबाट पीडित भएको थियो। 2008 मा, मोतीको विश्व निर्यात US $ 1.75 बिलियन पुग्यो केवल त्यसपछिका वर्षहरूमा घट्यो। सन् २०१० र २०११ मा क्रमशः १.४२ बिलियन अमेरिकी डलर र १५७ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्नु अघि सन् २००९ मा निर्यात १.३९ बिलियन अमेरिकी डलरमा घटेको थियो।
हङकङ 2012 मा 27.73% को बजार साझेदारीको लागि US$408.36 मिलियनको साथ शीर्ष निर्यातक थियो। चीनले US$283.97 मिलियनको बजार हिस्साको 19.28% बनाएर दोस्रो, जापान US$210.50 मिलियन (14.29%), अष्ट्रेलियाले US$173.54 मिलियन (11.785) र फ्रेन्च पोलिनेसियाले US$76.18 मिलियन (US$$.18 million) निर्यात गरेको छ। 5.17%) शीर्ष5समेट्न।
छैठौं स्थानमा ४.४६ प्रतिशतको बजार हिस्साका लागि अमेरिकी डलर ६५.६० मिलियनको निर्यात भएको छ भने स्विट्जरल्यान्डले ५४.७८ मिलियन अमेरिकी डलर (३.७२ प्रतिशत) र युनाइटेड किंगडमले ३३.०४ मिलियन अमेरिकी डलर (२.२४ प्रतिशत) निर्यात गरेको छ। यूएस $ 29.43 मिलियन मूल्यको मोती निर्यात गर्दै, इन्डोनेसियाले 2% को बजार हिस्सा संग9औं स्थानमा राख्यो भने फिलिपिन्सले 2012 मा US$ 23.46 मिलियन (1.59%) को निर्यात संग शीर्ष 10 सूचीमा पूरा गर्यो।
चित्र ५. विश्व निर्यातको शेयर र वृद्धि (%)
2008-2012 को अवधिमा, इन्डोनेसियामा 15.62% मा फिलिपिन्स पछि 19.69% को उच्चतम वृद्धि प्रवृत्ति छ। शीर्ष १० देशहरूमा क्रमशः 9% र 10.56% मा सकारात्मक वृद्धि प्रवृति अनुभव गर्ने अन्य निर्यातहरूमा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र थिए।
तथापि, इन्डोनेसियाले 2011 र 2012 को बीचमा वार्षिक रूपमा 7.42% संकुचनको सामना गर्यो, फिलिपिन्सले 38.90% को सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धि भएको छ र अष्ट्रेलिया सबैभन्दा खराब प्रदर्शनकर्ता भएको छ जुन 31.08% संकुचित भयो।
अष्ट्रेलिया बाहेक, शीर्ष 10 निर्यातकर्ताहरूमा एक मात्र देशहरू थिए जसले आफ्नो मोती निर्यातमा वृद्धि रेकर्ड गर्यो
22.09% को वृद्धि संग संयुक्त राज्य, 21.47% को साथ यूनाइटेड किंगडम र 20.86% मा स्विट्जरल्याण्ड।
विश्वले 2012 मा US$ 1.33 बिलियन मूल्यको मोती आयात गर्यो, वा 2011 को US $ 1.50 बिलियनको आयातको तुलनामा 11.65% कम। 2008-2011 को अवधिमा, आयात 3.5% को वार्षिक औसत संकुचन सामना गर्यो। विश्वको मोतीको आयात 2008 मा US$1.71 बिलियन अमेरिकी डलरमा झरेर US$1.30 मा उच्चतम पुगेको थियो।
चित्र 6. संसारबाट मोती, नाट वा पंथ, आदि को आयात
2009 मा बिलियन। आयातले 2010 र 2011 मा क्रमशः US $ 1.40 बिलियन र US $ 1.50 बिलियनको साथ रिबाउन्ड प्रवृत्ति देखायो जुन 2012 मा US $ 1.33 मा झरेको थियो।
आयातकर्ताहरू मध्ये, जापानले 2012 मा विश्वको कुल 1.33 बिलियन अमेरिकी डलरको मोती आयातको 27.86% बजार साझेदारीको लागि US $ 371.06 मिलियन मूल्यको मोती आयात गरेर सूचीको शीर्ष स्थानमा थियो। हङकङ 23.52% को बजार हिस्साको लागि US$313.28 मिलियनको आयातको साथ दोस्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका $ 221.21 मिलियन (16.61%), अष्ट्रेलिया US$ 114.79 मिलियन (8.62%) र स्विट्जरल्याण्ड टाढाको पाँचौं स्थानमा रहेको छ। US$47.99 (3.60%) को आयात।
इन्डोनेसियाले 104 औं स्थानमा उभिएको 2012 मा मात्र US $ 8,000 मूल्यको मोती आयात गर्यो।
लेखक: हेन्द्रो जोनाथन सहत
द्वारा प्रकाशित: राष्ट्रिय निकासी विकास महानिर्देशक। इन्डोनेसियाको व्यापार गणतन्त्र मन्त्रालय।
Previous post: တောင်ပင်လယ်ပုလဲ အင်ဒိုနီးရှား
Next post: Indonesia South Sea Pearl